U Maung Wai presented his Credentials to His Excellency Mr. Pranab Mukherjee , President of the Republic of India – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
U Maung Wai presented his Credentials to His Excellency Mr. Pranab Mukherjee , President of the Republic of India
U Maung Wai, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of India, presented his Credentials to His Excellency Mr. Pranab Mukherjee , President of the Republic of India on 30 November 2016, in New Delhi.
Dated.2December 2016
အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးမောင်ဝေသည် ၄င်း၏ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် နယူးဒေလီမြို့၌ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ၊ သမ္မတ မစ္စတာ ပရာနာ့ဗ် မူခါဂျီး ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်